Sei mamakisi evana asiri iwo chinhu chakakosha | Bezzia
Sei mamakisi evana asiri iwo chinhu chakakosha
Tony Torres | 25/05/2022 20:00 | Mazano amai
Kana gore idzva rechikoro rava kupera, yave nguva yekugamuchira uye kuongorora mamakisi anotyisa, mamakisi iwayo Vanogona kuita kukuvadza kwakawanda kune kuzviremekedza kwevaduku kana vasina kugamuchirwa zvakanaka. Nokuti nhamba imwe chete, nhamba yakapfava yakabatana nechidzidzo, haina kukwana kuti ione kuti kuedza kwave kuchiita panguva yechikoro.
Ndiani mumwe uye akaderera akafamba nekutambura kwekubhejera zvese nenoti imwe, chimwe chinhu chisina kunaka, kunyanya kana zvasvika kuvana. Nekuti kune zvakabuda pabvunzo tinofanira kuwedzera nhamburiko yakaitwa, maawa ekushanda pamba, kuzvipira kwekusiya zvimwe zvinhu zvinonakidza kuita mabasa uye basa remumba. Kuedza kwemwedzi yakawanda izvo zvinogona kushoreswa kana mamakisi ekupedzisira chete akatariswa.
1 Manotsi handiwo akanyanya kukosha
1.1 Ko zvinyorwa zvinoti kudii nezvehunhu hwevadzidzi
1.2 Nzira yakakosha kupfuura chinangwa
Manotsi handiwo akanyanya kukosha
Kunyange zvazvo ari madikanwa kuongorora vana, mamakisi handiwo anonyanya kukosha nokuti muzviitiko zvishomanana anoratidza kuedza kwechokwadi kwomudzidzi. Kuti usvike kumagiredhi ekupedzisira unofanirwa kupfuura nemazuva mazhinji ekufunda, zvidzidzo zvakawanda dzimwe nguva zvisinganyatsonzwisiswi. Mazuva ayo vadzidzi vanonyanya kusavapo-pfungwa, vakaisa misoro yavo pane zvimwe zvinhu, vachikura, vachivandudza hunhu hwavo, vasingakwanise kuregeredza zvidzidzo zvavo.
Mumwedzi iyoyo vakomana nevasikana vanopedza nguva yakawanda vachigadzirira uye vachidzidza uye kana zuva rebvunzo rasvika vanotamba zvese pakadhi rimwe chete. Chimwe chinhu chisina kunaka, nekuti zuva iroro vanogona kunge vachinyanya kutya, nezvinetso zvekuisa pfungwa pamwoyo, vanogona kunge vakarara zvakashata kana kuti vasingazive maitirwo ebvunzo. Y giredhi ravanowana, hariratidzi kuedza kwese ikoko zvachose iyo kana zvakadaro haina mubairo wayo wakafanira.
Nezvikonzero zvese izvi, mamakisi evana handicho chinhu chakakosha. Ingori nzira yekudzora kudzidza kuburikidza nehurongwa huri nyore kunzwisisa pakati pevabereki nevadzidzisi. Hazvina kuipawo kuti vana vazvinzwisise giredhi rakashata mhedzisiro yakaipa, kuti vanofanira kushanda kurivandudza uye kuvadzidzisa nzira yakanakisisa yokuzviita nayo.
Ko zvinyorwa zvinoti kudii nezvehunhu hwevadzidzi
Manotsi evadzidzi anogona kukubatsira kudzidza zvakawanda nezvehunhu hwemwana wako nekukura kwake. Kunyanya panyaya yevakomana vachiri kuyaruka vava kutanga kuita nharaunda yavo, kuva nezvido zvavo uye vari munzira inoenda kune ramangwana ravo rehunyanzvi. Mukomana anogara achiunza zvinyorwa zvepamusoro, inogona kuratidza dambudziko rekushandisa zvakanyanya. Haapedzi nguva pane zvimwe zvinhu, haafambidzane neshamwari, haadyidzane, iyi ingori mimwe mienzaniso yenyaya dzinofanirwa kudzorwa kuti vana vasaite matambudziko ane chekuita nezvidzidzo.
Nekune rimwe divi, kune vanamazvikokota, zvinotaurwa nemamwe manotsi anotenderera pane zvakatanhamara, zvinoratidza kuti mudzidzi anoshanda, zvidzidzo kuti aite zvidzidzo zvake. Asi anoratidzawo kuti une zvimwe zvinokunetsa, kuti unopedza nguva uchiita mamwe mabasa, kuti une zvinhu zvinokuvaraidza uye upenyu hwokushamwaridzana. Zvirokwazvo, mudzidzi ane hupenyu hwakajairika umo zvidzidzo zviri chikamu chakakosha, asi havafungi kuti chimwe chinhu chinotyisa.
Nzira yakakosha kupfuura chinangwa
Chikoro ibasa revana, ibasa ravo rekudzidza zvinhu zvakawanda uye kudzidzisa kuva nehupenyu hwevakuru hwemhando. Hazvinei kuti ndeipi nzira yavanosarudza, kana vachida kudzidza kana kuti kwete, kana vasina shuviro yekudzidza kuyunivhesiti kana kuita basa rehunyanzvi. Dzidzo chikamu chakakosha mukukura kwemwana uye vanofanira kuzviziva.
Asi maonero haafaniri kusiiwa, kukosha kwechokwadi kwemwana, iyo ndiyo kuedza, basa rakaitwa, chido chekuvandudza uye kuda kugara uchiita zviri nani. Zvose izvozvo ndizvo zvinofanira kukoshesa vabereki panopera kosi yacho. Nokuti nzira yakakosha kupfuura chinangwa uye naizvozvo, mamakisi evana handicho chinhu chinonyanya kukosha.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Vanamai » Mazano amai » Sei mamakisi evana asiri iwo chinhu chakakosha
Kuganhurwa kwenzvimbo muhukama hwevakaroorana
Ziva iyo itsva Massimo Dutti edhita: Nechiedza